OnePlus 7 Pro ayaa ku daatay sawirro dhab ah oo muujinaya shaashadda qalooca ee OLED iyo qeexitaankeeda | Androidsis
Laba sawir oo xaday oo ah nooca ugu horumarsan ee casriga xiga OnePlus 7 Waxay ka soo baxeen Weibo iyaga oo na siinaya macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan waxa soo saaruhu noo keydinayo oo ay la socoto calanka soo socda.
Sawirka koowaad ayaa muujinaya taas telefoonka waxaa lagu qalabeyn doonaa muuqaalka qalooca ee OLED, halka sawirka labaad uu shaaca ka qaaday qeexitaankiisa muhiimka ah. Sidoo kale, kan dambe ayaa sheeganaya inuu u bilaaban doono sidii OnePlus 7 Pro.
OnePlus 7 Pro: kani waa kii ugu dambeeyay ee aan ka ogaanno dhamaadka-sare
Sawir dhab ah ayaa ka dusay OnePlus 7 Pro
Sawirka kore ayaa muujinaya taas Midka soo socda ee OnePlus 7 Pro wuxuu ciyaari doonaa naqshad jilicsanmaadaama ay ku qalabaysan tahay shaashad OLED qalooca. Garka qalabku waa xoogaa qaro weyn yahay, halka dhaldhalaalka kale ay yihiin wax aan jirin. Warbixinnada kiisaska ee OnePlus 7 ee soo ifbaxay xilliyadii la soo dhaafay ayaa shaaca ka qaaday in ay ku imaaneyso bandhig aan yareyn iyo kamarad sawir qaade ah.
In kasta oo kamaradda hore aysan ka muuqan sawirka cusub ee xaday, joogitaanka bandhig aan yareyn waa calaamad cad oo ay u badan tahay in lagu qalabeyn doono. Waxay umuuqataa in lagu dhex daray a shaashadda akhristaha shaashadda.
Sawirka labaad ee xaday sawirka dhabta ah ee OnePlus 7 Pro
Sawirka labaad ayaa muujinaya taas Bandhigga aan fiicnayn ee OnePlus 7 Pro wuxuu labanlaabmi doonaa muuqaalka Super Optical. Cabirka tani waxay noqon doontaa 6,67 inji oo waxay u badan tahay inuu taageero u lahaan doono xallinta FullHD +. The Snapdragon 855 Waxay ku jiri doontaa hoosta qalabka qalabka oo ay weheliso 8 GB oo RAM ah.
Dhanka kale, calanka ayaa horay loo soo raray Android Pie. Nooca software-ka ee lagu sheegay inuu yahay "9.5.1GM31CB" waa calaamad muujinaysa inay ku sii soconayso daabacaada soo socota ee OxygenOS 9.5. Sidoo kale waxaa la tilmaamay in Waxay ku qalabaysan tahay 48 megapixel + 16 megapixel + 8 megapixel sedex muuqaal ah oo kamarad ah. Waa la arki doonaa haddii ay noqon doonto taleefan kale oo leh a Dareeraha Sony IMX586 sida ugu weyn. Telefoonku wuxuu leeyahay meel lagu keydin karo oo dhan 256GB.
Ugu dambeyntii OnePlus 7 Pro iyo Pro 5G waxaa laga yaabaa inay la yimaadaan noocyo isku mid ah, iyo farqiga kaliya ee ugu weyn wuxuu noqon karaa joogitaanka modem 5G ah oo kujira moodeelkii ugu dambeeyay ee Pro. OnePlus 7 wuxuu noqon karaa midka ugu raqiisan taxanaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » OnePlus 7 Pro ayaa ku daatay sawirro dhab ah oo muujinaya shaashadda qalooca ee OLED iyo qeexitaankeeda
Maxaa la sameeyaa haddii Kaaliyaha Google uusan ka jawaabin Android
WhatsApp wuxuu kuu oggolaanayaa inaad u daabacdo Dalalkaaga sidii sheekooyin Facebook ah